Itoobiya: Somaliland, Soomaaliya iyo Suudaanba Masar xidhiidh way la sameysan kartaa | Berberanews.com
Home WARARKA Itoobiya: Somaliland, Soomaaliya iyo Suudaanba Masar xidhiidh way la sameysan kartaa
Hargeysa(Berberanews)-Wasaaradda Warfaafinta Jamhuuriyada Somaliland, ayaa turjumaad sax ah ku samaysay hadal uu maalmihii la soo dhaafay warbaahinta Itoobiya siiyey Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha dibada ee dalkaasi, kaasoo dood badan iyo dareen diblomaasiyaddeed abuuray.
Hadalka Afhayeenka, ayaa warbaahin badan iyo dadka isticmaala baraha Bulshadu micnoyaal badan u sameeyeen.
Hase yeeshee sida lagu sheegay qoraal ay turjuntay Wakaalada Wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa waxa lagu cadeeyey in la dhalan-rogay hadalka Afhayeenka Dawladda Itoobiya.
War qoraal ah oo ay SOLNA ka diyaarisay arrintaasi ayaa lagu yidhi sidan:
“Waxa siyaabo xaqiiqada ka fog loo marin habaabiyey, loogana been sheegay shirkii Jaraa’id ee uu 7-dii Bishan ku qabtay Addis ababa Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya, Dini Mufti oo uu kaga hadlay Jamhuuriyadda Somaliland.
Telefishanka Aljazeera ayaa ka mid ahaa Warbaahintii sida xaqiiqada ka fog u turjuntay Hadalkii Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya oo ay baahisay in inuu Somaliland ku tilmaamay qayb ka mid ah Soomaaliya, taasi oo gabi ahaanba aan ku jirin hadalka masuulkaas”
Previous articleSanaag: Degmada Maydh iyo dhisamah deked cusub
Next articleRoobab khasaare xooggan gaadhsiiyay Degmada Sallaxley